दन्त चिकित्सा उपकरण निर्माता, दन्त दराज | YAYIDA
YAYIDA डेन्टल मेडिकल कम्पनी उच्च गति र कम गति दन्त दराज handpiece र भागहरु उत्पादन मा विशेषज्ञता।
दन्त उच्च गति ह्यान्डसियस
दन्त कम स्पीड ह्यान्डस्पिस
दन्त एक्स-रे एकाई
दन्त चिकित्सा उपकरण निर्माता
YAYIDA - दन्त ह्यान्डपीस, दन्त कुर्सी र दन्त एलईडी लाइट २०० 2006 देखि व्यावसायिक दन्त उपकरण निर्माता
दन्त उच्च गति र कम गति handpiece मा विशेषज्ञता।
YAYIDA दन्त रंगीन बिग पावर डेन्टल एलईडी क्युरिङ लाइट बत्ती
१. यो उपकरणले आयातित एलईडी, उच्च नीलो चमक संवेदनशील प्रयोग गर्दछ. यसले 420-480nm तरंग लम्बाइ भएको रेजिनलाई निको पार्न सक्छ र स्टोमाटोलोजी विभागमा दाँत मर्मत गर्न प्रयोग गरिन्छ।.२. LED डेन्टल अर्थोडन्टिक्स क्युरिङ लाइटले आयातित SMOS कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्दछ, क्षमता स्थिर छ, कुनै आवाज, कुनै कम्पन छैन.३. यसले उच्च क्षमताको लिथियम-आयन चार्ज गर्ने ब्याट्री प्रयोग गर्दछ, यो शक्तिले भरिएको बेला लगभग 80-100 पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ।.४. इलेक्ट्रिक कम हुँदा सर्किट जाँच गर्न यो एक बुद्धिमान ब्याट्री छ, यो अलार्म हुनेछ र प्रकाश फ्लैश हुनेछ.५. एलईडी क्युरिङ लाइट वायरलेसमा तीन मोडहरू छन्: तीव्र प्रकाश, बिस्तारै प्रकाश, र पल्स लाइट.
याइडा वायरलेस एल्युमिनियम Alunum hely crofficted लाइट कर्लिंग प्रकाश बत्ती
1. बहु उपस्थिति, वायरलेस अपरेसन2. विभिन्न उपचार आवश्यकताहरूको लागि उपयुक्त. तपाईंले चाहानु भएको जस्तो उपचार पूरा गर्नुहोस्.We. उच्च-प्रेमी सुरक्षित आधार?. उच्च-पावरको नेतृत्वको चिसो प्रकाश: कडा, बिस्तारै बलियो, फ्ल्यासW. डिजिटल प्रदर्शन ट्यूब.शरीर चिट्ठा बनावट
याइडा डे दन्तंश एक सेकेन्ड दन्त उत्तेछ दन्त वर्गमा बत्ती बत्ती बत्ती
1. नयाँ क्रपुल बहुविष्मिलेंगेला ongth औंमा 38 385NM-5115 मा उच्च-तीव्रता प्रकाश उत्पादन गर्न को लागी सबै लाइट-गार्ड दन्तनीय सामग्रीहरु को उत्पादन गर्न को लागी2.. परिष्कृत अप्टिक्सहरूको साथ जुन 10 मिमी लेन्समा उत्कृष्ट लाइटिकको साथ, Q7 कर्फिज प्रकाशले इष्टतम र लगातार टिप्न लगाईएको शक्ति प्रदान गर्दछ.
Yayda दन्त कर्लिंग atty ऑप्टिकल फाइबर फाइबर सुझावहरू सुझावहरू
1. विभिन्न अनुप्रयोगहरूको अनुसार तर्कसंगत डिजाइन र नाजुक निर्माणको साथ, हामी उन्नत टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर विभिन्न गिरायल फाइबर उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्दछौं, 56 56% भन्दा बढी मिटर.2. उच्च पारदर्शी फाइबर र स्टीलबाट बनेको.We. अवलोकन गर्न को लागी स्वत: अवलोकन गर्न योग्य.
YAYIDA कम्पनीको बिक्री र बिक्री पछि सेवाको एक भावुक टीम छ। उही समयमा, एक स्टप शपिंग आपूर्ति गर्नुहोस्।
कम्पनी जिद्दी गर्दछ
"गुणवत्ता पहिले, सेवा पहिले"। आयातित कच्चा माल, उपकरण, फिक्स्चर र मापनमा जोड दिनुहोस्, हाम्रा उत्पादनहरूलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ गुणस्तर समान उत्पादनहरूमा पहुँच दिन हाम्रो सक्दो प्रयास गर्न।
कम्पनीले आईएसओ १4485 of को उत्पादन कार्यान्वयन गर्दछ, अधिक अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरू उत्पादनमा जोड दिन्छ। र हामी OEM / ODM सेवा प्रदान गर्दछौं।
ODM व्यवसाय मा हाम्रो उत्कृष्टता बाहेक।
हामी पहिले नै हाम्रा सयौं उत्पादनहरू पठाउँदछौं।
सख्त उत्पादन गुण नियन्त्रण प्रणाली।
हामीमा काम गर्ने प्रत्येक प्रोजेक्ट गुणस्तर आश्वासनका लागि जाँच गरिन्छ।
YAYIDA को बारेमा
YAYIDA दन्त कम्पनी उच्च गति र कम गतिको दन्त ह्यान्डपीस, अनुसन्धान र विकास नयाँ सापेक्ष दन्त पार्ट्स र उत्पादनहरूमा विशेषज्ञता।
YAYIDA कम्पनीको जापानबाट NomuRADS मेशिनको बिभिन्न मोडल छन्, ग्राहकको बिभिन्न प्रेसिजन मशीनिंग सेवाहरू भेट्न सक्दछन्। ग्राहकका विशेष उत्पादनहरूका लागि हामी विश्वासयोग्य उद्यम हुन कुनै सार्वजनिक वा अन्य ग्राहकहरूलाई बेच्ने कुरामा जिद्दी गर्दैनौं।
हामी जीवनलाई प्रेम गर्छौं, र हामी दन्त उद्योगलाई प्रेम गर्छौं। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो दाँत उत्पादनले चिकित्सक र बिरामीको आशा अझ सजिलो साकार हुन सक्छ ---- दाँत स्वस्थ बनाउँदछ।
कम्पनीले आईएसओ १448585 को उत्पादन लागू गर्दछ, अधिक अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरू उत्पादनमा जोड दिन्छ।
दन्त एलईडी उच्च गति handpiece AYD-SLCM4
हाम्रो साथीहरू हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न आउँछन्, र नेतृत्व को उच्च गति handpiece आदेश र कम गति handpiece अर्डर बनाउन चाहन्छौं। तिनीहरू हाम्रो दन्त ह्यान्डपीस र हाम्रो सेवासँग खुसी छन्। हामी निश्चित गर्दछौं कि यो लामो समय सम्म करपेशन हुनेछ। ग्राहकको सन्तुष्टि हाम्रो प्रेरणा बन्नेछ, हामी गुणवत्ता र सेवा सुधार गर्दैछौं।